Sekuvuliwe ukubhalisela i-Elandskop Freedom Day Fun Run | News24
Sekuvuliwe ukubhalisela i-Elandskop Freedom Day Fun Run
UYABUYA futhi nakulonyaka umjaho waminyaka yonke obizwa ngokuthi i-Elandskop Freedom Fun Day.
Lo mjaho nozobe wenzeka okwesine kulonyaka uzoba mhla zingama-27 kuMbasa (April) e-Elandskop.Ngokusho komhleli walo mjaho uMnu Zazi Nxele inhloso yalo mjaho ukugubha usuku lwenkululeko baphinde bakhuthaze abantu ngokubaluleka kokuzivocavoca.
“Lo mjaho uvulelekile kuwona wonke umuntu awukhethile futhi ukuthi uhlala kweyiphi indawo.Ukungenelwa kwawo kumahhala ngoba sifuna ukuthi wonke umuntu ofuna ukungena akwazi ngaphandle kwezinkinga.Sifuna ukuthi abantu bakwazi ukuthi bagubhe lolu suku olubaluleke kangaka ndawonye siphinde futhi sibakhuthaze ngokubaluleka kokuzivocavoca.
“Okujabulisa kakhulu ukuthi kulonyaka kuzobe kukhona nabagijimi abagijima imijaho emikhulu nesicabanga ukuthi loko kuzosisa kakhulu ekukhuthazeni abantu basemiphakathini yethu ukuba bazibandakanye nemijaho efana nalena,” kubeka yena.
Lo mjaho uzobe uqukethe ibanga lika-5km kanye no-10km.Uma ngabe ufuna ukungenela ungathumela igama lakho, isibongo, iminyaka kanye nendawo ahlala kuyona ngomqhafazo okanye nge-WhatsApp enombolweni ethi : 072 150 0858.